तपाईंको YouTube भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्न दर्शकहरू प्राप्त गर्ने शीर्ष5तरिकाहरू - YTpals
YouTube सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई एक-अप गर्न र उनीहरूको YouTube र्याङ्किङ सुधार गर्न तिनीहरूको SEO रणनीतिमा काम गर्छन्। भिडियोहरू श्रेणीकरण गर्दा, YouTube एल्गोरिदमले दर्शकहरूको संलग्नतालाई पनि ध्यानमा राख्छ। त्यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण संकेतकहरू छन् जुन तपाईंले जैविक दर्शक संलग्नताको प्रकृति पहिचान गर्न आवश्यक छ। यी हुन् – नि:शुल्क युट्युब भ्यु, नि:शुल्क युट्युब लाइक, फ्री युट्युब सेयर, नि: शुल्क YouTube वाच समय, र निःशुल्क YouTube टिप्पणीहरू।
नयाँ च्यानलहरूलाई कहिलेकाहीँ YouTube मा तुरुन्तै क्लिक गर्न गाह्रो हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले हार मान्नु आवश्यक छ किनभने तपाईंसँग संलग्न हुन आफ्ना श्रोताहरूलाई प्राप्त गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्।
टिप्पणी खण्ड खेल
मूल्यवान दर्शक प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुको अलावा, तपाइँका भिडियोहरूमा टिप्पणीहरूले भिडियो संलग्नता बढाउन र टिप्पणी मार्केटिङ मार्फत तपाइँको पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। YouTube सिर्जनाकर्ताहरू प्रायः अचम्मको कुरा होइन YouTube टिप्पणीहरू खरीद गर्नुहोस्! तपाईंको YouTube भिडियोहरूमा थप जैविक टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न केही रणनीतिहरू हेरौं।
टिप्पणीहरूको जवाफ दिँदै र छलफलमा भाग लिँदै
तपाईंको आफ्नै भिडियोहरूमा टिप्पणी गरेर र छलफलको नेतृत्व गरेर आफ्ना दर्शकहरूसँग संलग्न हुनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको भिडियोहरूमा टिप्पणीहरूमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। तपाईंका दर्शकहरूसँग अन्तरक्रियाले संलग्नता निम्तो दिन सक्छ, तपाईंको च्यानलको विश्वसनीयता बढाउन सक्छ, र थप ट्राफिक ड्राइभ गर्न योगदान गर्न सक्छ। ठूला टिप्पणीहरूको लागि, प्रत्येकलाई जवाफ दिनु समयसँगै कठिन र बोझिलो हुन सक्छ। तपाईंले स्मार्ट जवाफ र डिब्बाबंद प्रतिक्रिया विकल्पहरूसँग उपकरणहरू प्रयोग गर्ने विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिक्रिया र सिफारिसहरू निमन्त्रणा
तपाइँका भिडियोहरू प्रश्नहरूको साथ अन्त्य गर्नुहोस् र दर्शकहरूलाई टिप्पणीहरू आमन्त्रित गर्नुहोस्। तपाईंले आफ्ना दर्शकहरूलाई प्रतिक्रियाको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि रचनात्मक प्रतिक्रिया लागू गर्ने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक सिफारिसहरू निगरानी गर्नुहोस् र सकेसम्म धेरै सुझावहरू लागू गर्नुहोस्। सबैभन्दा लोकप्रिय अनुरोधहरू छान्नुहोस् र तपाईंको दर्शकहरूको प्राथमिकताहरू पूरा गर्न भविष्यका भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
प्रश्नोत्तर सत्रहरू र उपहारहरू सञ्चालन गर्दै
अनौपचारिक प्रश्न र उत्तर (प्रश्न र उत्तर) सत्रहरू घोषणा गर्नुहोस् र दर्शकहरूलाई उनीहरूसँग हुन सक्ने कुनै पनि प्रश्न वा प्रश्नहरू सोध्न प्रोत्साहित गर्नुहोस्। यी प्रश्नहरू उठाउन र जवाफ दिन तपाईंसँग समर्पित भिडियोहरू हुनुपर्छ। दर्शकका प्रश्नहरूको जवाफ दिन लाइभ-स्ट्रिमिङ सत्रहरू एक राम्रो विकल्प हो, जसले दर्शकहरूलाई वास्तविक-समयमा तपाईंसँग संलग्न हुन सक्षम बनाउँछ। आफ्ना भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्न दर्शकहरूलाई प्रोत्साहन दिने उपहारहरू घोषणा गर्ने बारे विचार गर्नुहोस्। तपाईंको भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्ने केही अनियमित रूपमा छनौट गरिएका दर्शकहरूलाई साप्ताहिक वा मासिक उपहारहरू सञ्चालन गर्नुहोस्। त्यस्ता भिडियोहरू धेरै सेयर गर्न योग्य छन्। तर, आफ्ना श्रोताहरूलाई साझेदारी गर्न प्रोत्साहित गर्न, तपाईं सधैं सक्नुहुन्छ YouTube शेयरहरू किन्नुहोस्। धेरै सेयरहरूको भ्रमले मानिसहरूलाई जहिले पनि संगठित रूपमा सामग्री साझा गर्न बाध्य बनाउँछ।
ट्रोलहरू बाहिर निकाल्दै
ट्रोलिङ एक सामान्य सामाजिक मिडिया उपद्रव हो, र YouTube लाई यसबाट छुट छैन। उत्तम रणनीति भनेको नकारात्मकताबाट बच्नु र सबै ट्रोलहरूलाई बेवास्ता गर्नु हो। ट्रोलहरूसँग व्यर्थको कुराकानीमा संलग्न नहुन सल्लाह दिइन्छ। घृणित टिप्पणीहरूको प्रतिक्रियाले च्यानलको लागि खराब प्रतिष्ठा सिर्जना गर्न सक्छ। ट्रोलहरू सानो र हानिकारक लाग्न सक्छ, तर तिनीहरूको नकारात्मक टिप्पणीहरूले तपाईंको च्यानलसँग संलग्न हुन चाहने वास्तविक दर्शकहरूलाई टाढा लैजाने सम्भावना हुन्छ। तपाईंको च्यानलको वृद्धिमा निरन्तर कष्ट र कुनै पनि प्रतिकूल प्रभावबाट बच्नको लागि, तपाईंसँग ट्रोलहरूको टिप्पणीहरू असक्षम गर्ने वा लुकाउने विकल्प छ।
अन्य YouTube च्यानलहरु संग संलग्न
तपाईंको आलामा लोकप्रिय र आगामी सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको नजिक रहनुहोस् र तिनीहरूसँग संलग्न हुनुहोस्। तिनीहरूको च्यानल पछ्याउनुहोस् र तिनीहरूको भिडियोहरूमा मजाक वा अर्थपूर्ण टिप्पणीहरू छोड्नुहोस् ताकि तिनीहरूले छलफलहरू खोल्छन्। बारम्बार संलग्नताले तपाईंको च्यानललाई ध्यान दिनेछ, र यसले अन्य सिर्जनाकर्ताहरूलाई पनि तपाईंको भिडियोहरूमा स्मार्ट टिप्पणीहरू प्रतिदान गर्न र ड्रप गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ। तपाईंले आफ्नो भिडियोहरू मार्फत अन्य YouTube च्यानलहरू पनि सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंका केही वफादार दर्शकहरूले तपाईंको सिफारिस गरिएका च्यानलहरू वा भिडियोहरू हेर्न सक्छन्। तपाईंको च्यानलको नाम उल्लेख गर्ने YouTube भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्न तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्। अन्य सिर्जनाकर्ताहरूले पनि तपाईंको पक्ष फिर्ता गर्नेछन् र तपाईंको च्यानलमा ट्राफिक ल्याउनेछन्, तपाईंको च्यानलको पहुँच फराकिलो पार्नेछ। तपाईंले अन्य सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूसँग सहकार्य भिडियोहरू पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ र संयुक्त दर्शकहरूको साथ कर्षण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको YouTube भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्न दर्शकहरूलाई लोभ्याउन रणनीतिक दृष्टिकोण चाहिन्छ। केही आधारभूत रणनीतिहरूले तपाइँलाई तपाइँको दर्शक आधार को लागी एक अन्तरक्रियात्मक फोरम सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले, बारीमा, तपाइँको च्यानलको बृद्धिलाई गति दिनेछ।
यदि तपाईंलाई व्यावसायिक मद्दत चाहिन्छ भने यूट्यूब मनपर्दो किन्नुहोस् र टिप्पणीहरू, YTpals उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्छ। हामीसँग तपाइँलाई शिक्षित गर्न र तपाइँको YouTube संलग्नता बढाउन मद्दत गर्ने विशेषज्ञता छ। हामी पनि तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छौं YouTube हेर्ने घण्टा किन्नुहोस्.
अन्तमा, यदि तपाइँ संगठित रूपमा नि: शुल्क YouTube सदस्यहरू उत्पन्न गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए किन होइन YouTube ग्राहकहरू खरीद गर्नुहोस् हामी बाट? तपाईंको च्यानलमा धेरै सदस्यहरू हेर्दै, तपाईंले अर्गानिक सदस्यहरूलाई आकर्षित गर्न सुरु गर्नुहुनेछ जसले तपाईंको खातालाई माया गर्न बढ्नेछ। YTPals मार्फत, तपाईंले निःशुल्क YouTube टिप्पणीहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको YouTube भिडियोहरूमा टिप्पणी गर्न दर्शकहरू प्राप्त गर्ने शीर्ष5तरिकाहरू YTpals लेखकहरू द्वारा, 25 मई 2022
जब ब्रान्डेड सामग्रीको लागि YouTube परिचय र Outros प्रयोग नगर्ने?
YouTubers सँधै सुझावहरू र युक्तिहरू खोज्दै छन् जुन उनीहरूको YouTube च्यानलमा भिडियो स .्लग्नता बढाउन सक्छ। धेरै तरिकाहरूले YouTubers उस्तै प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। ती मध्ये एकले यूट्यूब इन्ट्रोज र आइट्रोस थप्दै छ। के हो…
YouTube मेट्रिक्स र डेटा पहुँच गर्न शुरुवातको मार्गनिर्देशन - के जान्ने
फेसबुकको पृष्ठ मनपर्दो र इन्स्टाग्रामका अनुयायीहरू जस्तै, युट्युबसँग पनि "साथीहरू" र "सदस्यताहरू" दुवैको रूपमा सफलताको केहि व्यक्ति-आधारित मेट्रिक्स छ। तपाईंको चयनित सेटिंग्समा निर्भर, केही प्रकारका प्रयोगकर्ताहरू ...
२०२१ का लागि उत्तम YouTube SEO अभ्यासहरू
गुगल गुगल पछि विश्वको दोस्रो ठूलो खोज इञ्जिन हो। यसको प्रख्याततामा वृद्धि स्मारकको केही कम छैन। गुगलको शीर्ष नतीजाहरूमा फिचर गर्न एसईओ रणनीतिहरू प्रयोग गरेको जस्तो,…